Inguva Dhidhiyo Yokudhinda Inotenderera Sei paSeO?
Wati wamboshamisika kuti SEO inobata sei majekiti ekudhinda digital? Hauna kuwana mhinduro yakajeka zvakadaro here? Hapana kunetseka. Nhasi, tichakutsanangurira zvakajeka kuti yakawanda sei kutengesa webhu kunobva pakutsvaga injini yekutsvaga.
Sezvaungave uchiziva kare, SEO yakashandura zvakawanda mumakore mashomanana apfuura. Yakashanduka uye yakapfuurira zvakanyanya kudarika zvisingabatsiri uye zvekare zvakakosha zvinyorwa zvekugadzira zvinhu zvakange zvakakurumbira pakati pemakore ekuma 1990. Pakazosvika gore ra2005, kunyange mabhizimisi maduku nekutangira zvakatanga kubhadhara SEO kunze kwenyika yakavimbisa kuti vaizobatsira kuwedzerwa mutengesi uye kutengesa.
Hazvireve kuti muna 2017 SEO ichiri kuita basa rinokosha pakusimudzira mabhizimisi epaIndaneti. Tsvaga injini yekugadzirisa maitiro inounza high-value results kana ikashandiswa zvakanaka. Saka, regai tiende zvakadzama muhurukuro ino uye tione kuti kudengesa kwema digital kunobva pane SEO.
Basic SEO Kubatanidzwa muTeams Marketing Makambani
Mazuva ano, ruzhinji rwevatengesi vekutsvaga nevewebhu vakagadzira zvinosanganisira SEO maitiro maitiro ekugadzira. Izvo zvinoitika nokuti mazuva ano SEO nzira yakanyanyisa uye yakabatanidzwa kupfuura kare kare. Iyo inobudirira kubudirana nemamwe kurairirwa kwekutengesa zuva nezuva. Heano mamwe emitemo iyi:
Nhaurirano yeChirongwa: Zviripo ndeye mambo, rinokosha SEO assets, chimbo chakasimba - chiti chero chaunoda. Icho chinhu chisingarambiki chekuti mari zhinji yeSEO inotsigira pane zvakasikwa. Kushandisa nzira yakabudirira yehupenyu pamwe ne SEO inogona kukurumidza kukurumidza kushandura chete asiwo kutendeseka kwebasa.
Social Media Marketing: Inokurudzirwa zvikuru kuti iyananise purogiramu yako yehupfambidzani ne SEO yako hurongwa hwokuzadzisa zvizere zveSO benefits. Nharaunda dzekugara dzevanhu dzakakosha pakuunza backlinks yemhuka kune rako rekushandisa. Zvakare, zvinoratidza kana yako yehutano nzira iri kushanda zvakanaka kana inoda kuvandudzwa.
Kubhadhara Kutsvaga: Nokusanganiswa neGoogle Analytics ne SEO, unogona kutora mazwi makuru anokosha, nokudaro unowana kugadzirwa kwehupenyu. Mabhodhi ekutsvakurudza anotengesa anogona kubatanidzwa nemaSEOO kuburikidza nekugadzirisa zvinhu zvakawanda, kusanganisira zvirongwa zvemashoko makuru, mapeji ekutumira, mapeji ekugadzirisa mukati uye mutsara unoenderera mberi.
Kukurukurirana kwevanhu: Online mukurumbira kutarisira imwe danho rinokosha mune SEO yako hurongwa. Mapoka eP anokwanisa kubatsirwa zvikuru nekushanda pamwe ne SEO: mazita anotaura mazita anogona kuita zvose: kuvepo kwepanyika nekutsvaga kuonekwa.
Kushandurwa: Kubatanidza kutendeuka maitiro uye SEO kunogona kuwedzera zvirongwa zvehupenyu. Kana iwe ukasangana nemukana wakanakisisa wemushandisi nerwendo rwakakodzera rwehupenyu, iwe uchaunza vanogutsa vashandisi pawebsite yako. Funga nezvekuverenga magetsi ekupisa kuti unzwisise vashandi vako zviri nani. Uyewo, edza UI yako nguva dzose.
Sezvaunogona kuona, SEO inobatanidza nedzidzo dzakawanda mukati mekutengeswa kwema digital.
SEO chinhu chinochinja: zuva rimwe nerimwe tinoona mikana mitsva yekutsvaga. Chinhu chakanakisisa chaunogona kuita kuti uende kure nekutendeuka kwako ndechekujekesa uye kugadzirisa nekambani yako ye digital. Varege vazive zvauri kuita, vaudze nezvematanho ako anotevera, shandisai SEO pfungwa dzako nevadzidzisi vedijiti uye ona zvinoitika mumwedzi Source . Zvichida, iwe unoda migumisiro yekubatana kwakadaro!